विभिन्न देशले गरे यात्रामा कडाइ, यो नयाँ भेरिअन्टबारे हामीलाई के थाहा छ? - sambahak
Home स्वास्थ्य विभिन्न देशले गरे यात्रामा कडाइ, यो नयाँ भेरिअन्टबारे हामीलाई के थाहा छ?
विभिन्न देशले गरे यात्रामा कडाइ, यो नयाँ भेरिअन्टबारे हामीलाई के थाहा छ?
बीबीसी :- दक्षिण अफ्रिकाले कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरिअन्ट पत्ता लगाएका कारण आफूलाई प्रशंसा गर्नुको साटो दण्डित गरिएको गुनासो गरेको छ।
विभिन्न राष्ट्रहरूले दक्षिण अफ्रिकाबाट हुने यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले यस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको हो।
प्रारम्भिक प्रमाणहरूका अनुसार ओमिक्रोनबाट सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना उच्च छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले शुक्रवार यो नयाँ भेरिअन्टलाई “भेरिअन्ट अफ कन्सर्न” का रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो।
कोभिड-१९ को यो नयाँ भेरिअन्ट यूके, जर्मनी, बेल्जियम र इटलीमा पनि फेला परेको छ भने चेक रिपब्लिकमा पनि यो भेरिअन्ट पुगेको आशङ्का गरिएको छ।
ओमिक्रोन भेरिअन्ट पुष्टि भएको इजरेलले आइतवार मध्यरातबाट विदेशीहरूलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा रोक लगाएको छ। टाइम्स अफ इजरेलका अनुसार यो प्रावधान १४ दिनसम्म लागु हुनेछ।
ओमिक्रोन भेरिअन्ट बोत्स्वाना र हङ्‌कङ पनि पाइएको छ।
दक्षिण अफ्रिकाबाट नेदरल्यान्ड्स आइपुगेका सयौँ यात्रुहरूको परीक्षण गरिराखिएको छ।
वायुसेवा कम्पनी केएलएमका दुईवटा उडानमा झन्डै ६१ जना यात्रुहरूमा कोभिड पुष्टि भएको छ र उनीहरूलाई आम्स्टर्डामको शिपल विमानस्थलनजिकै एउटा होटलमा क्वारन्टीनमा राखिएको छ।
नोभेम्बर २४ तारिखमा पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकाले यो भेरिअन्टबारे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई जानकारी गराएको थियो।
यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्धलाई दक्षिण अफ्रिकाको विदेश मन्त्रालयले कडा आलोचना गरेको छ।
“उत्कृष्ट विज्ञानलाई प्रशंसा गरिनुपर्छ, दण्डित होइन,” उसले भनेको छ।
विश्वका अन्य मुलुकहरूमा नयाँ भेरिअन्ट फेला पर्दा व्यक्त प्रतिक्रिया पूर्ण रूपमा फरक रहेको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।अफ्रिकी युनियनका एक अधिकारीले नयाँ भेरिअन्टको उत्पत्ति हुनुमा विकसित राष्ट्रहरू दोषी रहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।
“अहिले जे भइरहेको छ त्यो अपरिहार्य छ। यो समतामूलक, अत्यावश्यक र द्रुत रूपमा खोप दिन विश्वको असफलताको परिणाम हो। यो विश्वका धनी राष्ट्रहरूले (खोप) थुपारेर राख्नु को नतिजा हो र स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो अस्वीकार्य छ,” युनियनको खोप डेलिभरी अलायन्सका सहअध्यक्ष आयोआडी आलाकिजाले भनिन्।
शुक्रवार र शनिवार कैयौँ राष्ट्रहरूले नयाँ व्यवस्थाहरूको घोषणा गरेका थिए।
युरोपियन सङ्घअन्तर्गत रहेका राष्ट्र र स्विट्जरल्यान्डले सोमवारबाट अधिकांश दक्षिण अफ्रिकी मुलुकबाट हुने उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेका छन्। दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाब्वे, बोत्स्वाना, लसूटू र एस्वाटिनीबाट आउने यूके वा आयरल्यान्डका नागरिक वा यूकेका बासिन्दाबाहेक अरू यात्रुलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।
अमेरिकाले पनि सोमवारबाट लागु हुनेगरी दक्षिण अफ्रिकासहित आठ देशबाट आउने आफ्ना नागरिकबाहेक अरू यात्रुलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।
जापानले अधिकांश दक्षिण अफ्रिकी देशहरूबाट आउने यात्रुलाई अनिवार्य १० दिन क्वारन्टीनमा राख्ने निर्णय गरेको छ। सो अवधिमा समयमा उनीहरूले चारवटा परीक्षण गराउनुपर्नेछ।
भारतले दक्षिण अफ्रिका, बोत्स्वाना र हङ्‌कङ सहितका देशबाट आउने यात्रुहरूमाथि निगरानी बढाउन र परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ।
इरानले छवटा दक्षिण अफ्रिकी देशहरूबाट आउने यात्रुहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।
ब्रजिलले पनि छवटा दक्षिण अफ्रिकी देशबाट आफ्नो देशमा हुने यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ।
थाईल्यान्डले आठवटा दक्षिण अफ्रिकी देशहरूबाट आउने यात्रुहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।
नेपालले दक्षिण अफ्रिका क्षेत्र भएर आउने हवाईयात्रुलाई अनिवार्य क्वारन्टीन राख्ने निर्णय गरेको छ।
नेपालको दक्षिण अफ्रिकी क्षेत्रमा सीधा हवाई उडान सम्पर्क नभए पनि त्यस क्षेत्रबाट आउने र त्यस क्षेत्रलाई ट्रान्जिट पारेर आउने यात्रुलाई एक साताको क्वारन्टीन अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
नयाँ भेरिअन्ट कस्तो छ?
शुक्रवार एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उसले उक्त भेरिअन्टमा धेरै उत्परिवर्तनहरू र तीमध्ये केही चिन्ताकारक भएको जनाएको थियो
पहिलाका उत्परिवर्तनभन्दा अहिले पुष्टि भएकाले उत्परिवर्तनहरू थप घातक छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।बीबीसी संवाददाता जेम्स ग्यालहरले अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसमा भएकामध्ये अहिलेका उत्परिवर्तनले भाइरसलाई अत्यधिक सङ्क्रामक बनाएको बताएका छन्।
भाइरसमा धेरैवटा उत्परिवर्तन भएकाले एक वैज्ञानिकले यसलाई “भयानक” भनेर व्याख्या गरेका छन्।
नयाँ भेरिअन्ट देखिएको अवस्था अहिले सुरुकै चरणमा रहेको र अहिलेसम्म धेरै बिरामीहरू दक्षिण अफ्रिकाको एउटा प्रान्तमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। तर यसको सङ्क्रमण अन्यत्र पनि फैलिएको सङ्केतहरू देखा परेका छन्।
दक्षिण अफ्रिकास्थित सेन्टर फर एपिडेमिक रेस्पोन्स एन्ड इनभेशनका निर्देशक प्राध्यापक टुलिओ डि ओलिभियराले यसअघि फैलिएका अन्य भेरिअन्टभन्दा यो “धेरै भिन्न” भएको र “उत्परिवर्तनको अस्वाभाविक सङ्ग्रह” देखिएको बताए।
Previous articleजीवन बचाउ भन्दै सांगीतिक समाजको पाँचौं स्थापना दिवस मनाइयो
Next articleभक्तपुर कांग्रेसको सभापतिमा दुई हस्ती अन्य पदमा को को परे त